Fahafantarana ny fomba fifampiarahaban'ny aostraliana | Fitsangatsanganana tanteraka
Raha amin'ny fialan-tsasatrao manaraka dia te-hitsangatsangana any Aostralia ianao na te hianatra any amin'ity firenena ity, ny iray amin'ireo lafin-javatra tokony ho fantatrao mba hampifanaraka haingana amin'ny fiainana dia ny fomba amam-panaony sy ny fahazarany isan'andro.
Ho an'ny olona sasany monina any amin'ny firenena vaovao dia mety hiteraka fahatairana ara-kolontsaina, indrindra satria zatra ny toerana vaovao misy azy ireo. Ny miaina ao anaty fiarahamonina toa ny aostralianina dia misy zavatra maromaro azonao atao, izay hanampy anao hifanaraka faran'izay haingana sy hahatsapa toy ny trondro anaty rano.
Amin'ny fifandraisana voalohany amin'ireo tompon-tany, na hangataka tari-dàlana na karazana fampahalalana, dia mila miarahaba azy ireo ianao ary mampahafantatra ny tenanao amin'ny fomba mety. Noho io antony io dia hianarantsika amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fifampiarahaban'ny aostralianina.
1 Manao ahoana ny aostralianina?
2 Manao ahoana ny fiarahabana any Aostralia?
3 Inona ny rijan-teny ampiasaina hiarahabana any Aostralia?
4 Manao ahoana ny fampisehoana?
5 Ahoana ny fomba fifampiarahaban'ny aostralianina amin'ny fety iray?
6 Fomba hafa fiarahabana any amin'ny firenena Commonwealth
Manao ahoana ny aostralianina?
Fantatra amin'ny anarana hoe "Aussies" aostralianina amin'ny ankapobeny dia mafana, tso-po, mifaly ary tsy ara-potoana amin'ny fifampiraharahana ataon'izy ireo. Ankafizin'izy ireo ny haavon'ny fanabeazana, izay adika amin'ny fotoana mahavelona asa sy kalitaon'ny fiainana ambony. Ity farany dia hita taratra amin'ny toetrany sariaka, misokatra ary milamina.
Ny aostraliana dia olona tsotra izay manome lanja fatratra ny ezaka sy ny asa mafy, nefa tsy manavaka ny kilasy sosialy. Mampiavaka azy ireo ny sainy misokatra, ny fanajana ny kolontsaina hafa ary ny fandraisany vahiny amin'ny vahiny. Raha fintinina dia olona mafana, akaiky sy sariaka ny aostralianina.
Manao ahoana ny fiarahabana any Aostralia?
Rehefa miresaka momba ny fiarahabana any Aostralia isika, dia tsy maintsy jerentsika ny sahan-kevitra niainan'io fihaonana io. Raha atao teny hafa, ny fianakaviana na ny namana tsy ara-potoana mivory dia tsy mitovy amin'ny fivoriana asa ofisialy kokoa.
Ohatra, ny aostraliana eo amin'ny namana dia mifampiarahaba amin'ny fomba feno fitiavana: amin'ny oroka amin'ny takolaka na famihina fohy. Ankehitriny, na raharaham-barotra na fivorian'ny oniversite io, dia mifampiarahaba am-panajana ara-dalàna sy ara-dalàna amin'ny alàlan'ny tànana fohy sy tsiky ny Australiana.
Araka ny fomban-drazana aostralianina sy toy ny any amin'ny firenena maro hafa, ny firariana dia tokony hatao amin'ny fiandohan'ny fivoriana sy ny fiafaran'ny fivoriana, ary koa ny vahiny mety ho tonga mandritra ny fivoriana.
Ho fanampin'izany, matetika ny aostralianina dia miresaka amin'ny olon-kafa mampiasa ny anarany na dia amin'ny fivoriana voalohany aza, ka zava-dehibe ny hitadidinao ny anaran'ny mpiara-miasa aminao rehefa ampahafantarina anao izy ireo. Ilaina ihany koa ny fifandraisana amin'ny maso rehefa miarahaba ilay iray hafa ianao. Izany dia mariky ny fanajana ary manondro koa fa mihaino tsara ianao ary mihaino izay lazain'ny olona iray hafa.
Inona ny rijan-teny ampiasaina hiarahabana any Aostralia?
G'day: Ny endrika nohafohezina ny hoe "Good day" no maodely mahazatra indrindra sy tsy ara-potoana ifampiarahabana ary tononina hoe "gidday." Azo ampiasaina na andro na alina.
"Ow ya goin 'mate?": Io no fanafohezana voafintin'ilay fanta-daza "Ahoana no hataonao vady?" izay midika hoe manao ahoana ianao.
"Cheerio": Fanaovana veloma.
"Cya This Arvo": Araka ny ho hitanao, ny aostraliana dia tia mamintina teny. Midika io "forme" io, anio hariva. Mampiasa ny fomba fiteny hoe arvo izy ireo hilazana ny tolakandro amin'ny toe-javatra rehetra.
"Hooroo": Midika izany fa hahita anao any aoriana.
"Toodle-oo": Fomba iray hafa hanaovana veloma.
"Salama maraina Salama maraina.
"Rahampitso": Salama tsara.
"Salama hariva": Salama hariva.
"Alina sambory Alina.
"Mahafinaritra mihaona aminao": Mahafinaritra mihaona aminao.
"Mahafinaritra ny mahita anao": Faly aho mahita anao.
Manao ahoana ny fampisehoana?
Raha ny amin'ny fanolorana ny lahy sy ny vavy amin'ny sehatra ara-dalàna, ny fitenenana "Señor", "Señora" ary "Señorita" dia ampiasaina ho "Andriamatoa", "Ramatoa" ary "Miss" ny fomba fiteniny avy amin'ny teny Anglisy.
Raha fampisehoana tsy ara-potoana eo amin'ny vondrona namana iray dia azo ampiasaina ny fitenenana toy ny "Ity no namako Peter" (namako izy Peter) na "Ity no mpiara-miasa amiko Ann" (Ana izy, mpiara-miasa amiko) .
Ahoana ny fomba fifampiarahaban'ny aostralianina amin'ny fety iray?
Azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo raikipohy noresahiko tao amin'ireo fehintsoratra teo aloha. Na izany aza dia tokony ho ao an-tsaina fa raha asaina amin'ny fety na barbecue ianao dia fanaonao ny mitondra zavatra hosotroina (ohatra ny labiera, divay na zava-pisotro malefaka) mba hankafizan'ny vondrona sy anao manokana.
Ary koa, any Aostralia dia heverina ho fahalalam-pomba ny fifandraisana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fety mba hahitana raha mila izy ireo na maniry anao hitondra zavatra hafa. Etsy ankilany, raha asaina hisakafo hariva any an-tranon'olona ianao, dia fanao matetika ny mitondra fanomezana ho an'ny mpampiantrano rehefa tonga ianao, toy ny fehezam-boninkazo, boaty sôkôla na divay misy divay.
Fomba hafa fiarahabana any amin'ny firenena Commonwealth
Ny Commonwealth dia fikambanana an-tsitrapo misy firenena maherin'ny dimampolo izay mampifamatotra ny fifandraisana ara-koltoraly, ara-tantara ary ara-kolontsaina, ny maro amin'izy ireo dia anglisy ny fiteny ofisialy.
Na dia samy manana ny rafitra politika misy azy aza ny firenena tsirairay avy ary mahaleo tena, ny sasany toa an'i Aostralia na Kanada dia mbola mitazona ny fifandraisany amin'ny mpanjaka britanika. Ka ahoana ny fiarahabanao any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Commonwealth toa an'i Canada na Angletera?
Ny Kanadiana dia iray amin'ireo olona sariaka indrindra eran'izao tontolo izao, izay adika amin'ny fiarahabana ampiasainy hifandraisana amin'ny hafa.
Ohatra, ao Quebec ny fiarahabana fampiasa matetika dia ny "Bonjour" sy ny "vaa va?" raha any Maritimes dia mifampiarahaba ny olona amin'ny "Hello" na "Hi" tsotra arahin'ny namana "How ya 'doin'?" Etsy ankilany, i Ontario sy i Toronto dia mampiasa formula mitovy amin'izany ihany koa.
Voalaza fa i Alberta sy Saskatchewan no misy olona mpinamana indrindra ao amin'ny firenena ary ho hitanao hatrany ny olona vonona hiresaka tsy toy ny any amin'ny tanàna lehibe izay mazàna be ny olona.
Ny fomba mahazatra indrindra ampiasain'ny anglisy hifampiarahabana dia ny fifanomezan-tanana ary mahazatra ny fampiharana izany rehefa misy olona ampahafantarina olona hafa na alohan'ny hanombohana fivoriana eo amin'ny tontolon'ny asa.
Matetika ianao dia miarahaba azy amin'ny oroka iray fotsiny amin'ny takolakao rehefa mpinamana na olom-pantatra ny mpiresaka ary misy ny firaiketam-po eo amin'izy ireo. Tsy toy ny firenena toa an'i Espana, tsy ny zavatra mahazatra indrindra ny miarahaba oroka foana.
Ny fomba fiarahabana hafa dia:
"Salama na Salama": Midika hoe "salama".
"Manao ahoana ianao?": Midika izany hoe manao ahoana ianao ary matetika no lazaina amin'ny toe-javatra ara-dalàna miaraka am-tànana.
"Manao ahoana ianao?": Midika koa izany hoe "manao ahoana ianao" fa ampiasaina amin'ny toe-javatra tsy ara-potoana kokoa. Valiana matetika amin'ny hoe "Tsara aho misaotra, ary ianao?" izay midika hoe "Salama aho, misaotra anao ary ianao?"
"Mahafinaritra ny mihaona aminao": Ity andianteny ity dia midika hoe "mahafinaritra ny mihaona aminao" ary matetika no miteny mandritra ny tànana. Matetika dia valiana amin'ny "mahafinaritra mihaona aminao koa" (faly mihaona aminao koa) ary matetika no lazaina eo am-pelatanana.
"Faly mifankahita aminao": Fomba iray hafa hanehoana fa misy olona faly mahita olona hafa. Mba hamaliana, "koa" dia ampiana amin'ny faran'ny fehezanteny toy ny tamin'ny tranga teo aloha.
Ampiasao ireto torohevitra kely ireto amin'ny fivoriana ho avy any amin'ny ranomasina ary hoarahabaina toy ny "Aussie" marina ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny fahafantarana ny fomba fifampiarahaban'ny aostralianina
Ireo carepenis dia mifampiarahaba toy ny pelaka sy mitsentsitra akoho lahy sy vehivavy mihomehy ary mihomehy pelaka ary misambotra ny borikiny sy ny tits ary manondraka ny borikiny mandritra ny 3000 ora mihetsiketsika sy mifarana ny shitdddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mamaly an'i steven